Lee na Austria - Ihe ị ga-eme ma gaa na otu n'ime ebe kachasị mma | Akụkọ Njem
Ihe kacha mma ị nwere ike ime ma hụ na Austria
Maka na mgbe anyị na-aga ebe anyị na-agatụbebeghị, anyị chọrọ ile ihe niile n’enweghi nkọwa zuru ezu. Mana ị ga-anụrịrị njem a ma ọ bụghị mgbe niile ịga site n'otu ebe gaa ebe ọzọ ịchọ ihe ncheta ma ọ bụ nkuku isi. Ma ịmara otu esi akwụsị maka nkeji ole na ole iji bie ndụ ahụmahụ dị ukwuu site n’echiche ọzọ. Ya mere, taa anyị na-ekwu ihe ị ga-eme ma hụ na Austria.
Un kpokọtara ebe nwere ọtụtụ ileta, kamakwa iji kporie ndụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọnụnọ gị adịghị ogologo. Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịme ma hụ na Austria, mana anyị hapụrụ gị ihe ndị dị mkpa na ndị niile bara uru. Ọ fọdụrụ gị ka ịhazi onwe gị ma mee ọtụtụ n'ime ha!
1 Obí eze ukwu dị na Vienna
2 Nwee echiche dị na okporo ụzọ Grossglockner
3 Ihe ịhụ na Austria: Salzburg
4 Gba ọsọ na Austria
5 Crystalwa Crystal na Wattens
6 Hallstatt, bụ obodo ndị nwere ọdọ mmiri
Obí eze ukwu dị na Vienna
Isi obodo Autria bụ ebe obibi maka ọtụtụ ebe iji tụlee. Ikekwe ekwesịrị ikwu banyere ya niile bụ ezigbo mma. Mana n'ezie, dịka anyị na-agakarị ụbọchị nwere ụbọchị, anyị kwesịrị iji ha mee ihe. Maka nke a, otu n’ime nleta dị mkpa bụ obí eze. Ihe kacha mkpa bụ obí eze nke bu nke kacha ukwu na nke ochie. A na-ekwu na ọ malitere na narị afọ nke iri na atọ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na o nweela ụfọdụ ndọtị.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ Obí eze Belvedere nke e wuru na narị afọ nke XNUMX. O nwere ulo abuo ma kewapu ya na nnukwu ubi nke gbara ha gburugburu site na uzo anwansi. N'ikpeazụ, anyị na-ezute Schönbrunn obí eze. O nwekwara nnukwu ubi, ekwuputala na UNESCO World Heritage Site. Na nke a, a ghaghi itinye ya na narị afọ nke iri na asaa.
Nwee echiche dị na okporo ụzọ Grossglockner
I nwere ike iche na okporo ụzọ abụghị akụkụ nke ihe ị ga-eme ma hụ n'Austria, mana na nke a ọ bụ. Mpaghara nwere nkenke dị nkọ, mkpọda dịgasị iche iche mana ọmarịcha ịma mma n'akụkụ abụọ. A na-ekwu na ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma na Europe. Gafe ya ga-ewe gị oge ebe ọ bụ na ọ dị kilomita 48, mana enweghị obi abụọ, ị ga-akwụsị n'oge dị iche iche iji mee ka oge ahụ ghara ịnwụ anwụ.
Ga-anụ ụtọ ịta ahịhịa na ọdọ mmiri, na-enweghị na-echefu glaciers. Cheta na emegheghi n’abali na ee site n'ọnwa Mee ruo Ọktọba. Enwere ọtụtụ ndị njem nleta na-enweta ya, sitere n'akụkụ ụwa niile. Ọ bụ ezie na site n'afọ 2021, ndị Ndị Mexico Ha ga-achọ ETIAS ka ha nwee ike ịbanye na EU wee nwee ọhụhụ na ebe dị ka nke a. Ga abu ohuru chọrọ ịga Europe site na Mexico.
Ihe ịhụ na Austria: Salzburg
Na mgbakwunye na ịma mma ya nke mpụga, nke enwere ike ịmatakwu n'akụkụ ọ bụla, ọ nwekwara nke dị n'ime. Ọ bụ ebe a na-eme ememme nnukwu oge okpomọkụ na ọ bụ ya, anyị ga-echeta nke ahụ hụrụ Amadeus Mozart mụrụ. Lọ akụkọ ihe mere eme ya nwere Katidral, yana Abbey nke San Pedro ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk. O nwekwara ọtụtụ obí eze na ebe ngosi ihe mgbe ochie kwesịrị ileta.
Gba ọsọ na Austria
Ọ bụ ọzọ n'ime ihe ị ga-eme ma hụ na Austria. Maka na enwere ọtụtụ ebe zuru oke ịme egwuregwu a. Ọ bụ ezie na ọ karịrị karịa nke ahụ, ebe ọ bụkwa akụkụ nke ọdịnala ma ọ bụ ọdịnala ha. N'ihi ya, anyị ga-ekwu okwu banyere ọtụtụ njiri mara iji chebara echiche. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahụ Innsbruck na ụkwụ nke Alps, na-atụrụ ndụ. N'ezie, onye ọzọ a ma ama bụ Ischgl, nwere ọtụtụ mkpọda na echiche dị ịtụnanya. N’agaghị echezọ Sölden ma ọ bụ Kitzbühel, ebe anyị na-aga ịchọta obodo akụkọ ihe mere eme, nke nwere ọtụtụ ndị njem nleta, ndị na-anaghị abịa ski mgbe niile.
Crystalwa Crystal na Wattens
na Ngwaahịa Swarovski Ha dabere na Wattens. Luxuryfọdụ okomoko aghụghọ na-ama ama n'ụwa nile na Ya mere, ị na-arara a nnukwu ohere na-enwe ha n'ụzọ kwekọrọ nnọọ. Worldwa kristal bụ ogige ntụrụndụ nke anyị ga-ahụ na Wattens, kilomita iri na asaa site na Innsbruck. Kedu otu ọ ga-esi pere mpe, ọ nwere nnukwu ubi, ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe a na-ere nri yana ebe egwuregwu, ka anyị wee soro ndị ezinụlọ anyị niile ga.
Hallstatt, bụ obodo ndị nwere ọdọ mmiri
Anyị enweghị ike ichefu obodo ndị dị n'akụkụ ọdọ mmiri, n'ihi na ha bụkwa ihe ndabere maka ikwu maka ịma mma yana obi iru ala nke a na-eku n'ime ha. A ghaghị ikwu na ruo na narị afọ nke XNUMX, a ga-eji ụgbọ mmiri, ma ọ bụ n'okporo ụzọ ndị dị warara ruo ya. Offọdụ ebe ndị dị n’obodo a bụ nnu nnu, nke kachasị ochie n’ụwa. Nakwa akụkụ ya bụ isi nke nwere facades jupụtara na osisi vaịn na okooko osisi dị iche iche. O nwekwara ulo uka ato na ihe ndi mgbe ochie Towerlọ elu Rudolf, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX. O yiri ka enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma mee n'Austria, yabụ a na-ewere ya dị ka mpaghara ndị njem nleta dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Austria » Ihe kacha mma ị nwere ike ime ma hụ na Austria